समाचार – Page 386 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०२:३३ English
खाग तस्कर राजधानीबाट पक्राउ ४ बैशाख २०६९, सोमबार १८:२६
संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति बनेको नेताहरुको दावी
काठमाडौ ४ बैशाख । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन हिजोदेखि निरन्तर बसेको मधेसी मोर्चासहित तीन दलका शिर्ष नेताहरुको बैठक सकिएको छ । काठमाडौको हात्तिबन रिसोर्टमा बसेको बैठक संविधान निर्माणका क्रममा देखिएको विवादित विषयहरु राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन..
स्वेच्छिक अवकास रोज्ने लडाकुको सङ्ख्या ४ हजार
काठमाडौ, ४ बैशाख । दोस्रो पटक सुरु गरिएको माओवादी लडाकु पुनर्वर्गीकरणको तेस्रो दिनसम्ममा स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने लडाकुहरुको सङ्ख्या ४ हजार २ सय ६८ पुगेको छ । दलहरु शान्ति प्रक्रियाको विवादित विषयमा सहमति गरेर संविधान निर्माणको काममा लागिपरेको बेला लडाकुहरुले भने आफूहरुलाई..
सिरहा भिषण आगलागी, करौडौ रुपैया बराबरको धनमालको क्षती
सिराहा, ४ बैशाख । सिरहाको सिसवनी खुरुक्याही–६ सिसवामा हिजो दिउँसो भिषण आगलागी भएको छ । आगलागीबाट २३ परिवारको ४१ घर गोठ जलेर नष्ट हुँदा करिब १ करोड रुपैयाभन्दा बढीको क्षती पुगेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । स्थानीय देव नारायण यादवको घर अगाडिको घुरबाट २ बजे सुरु भएको आगोले २३..
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन शिर्ष बैठक आज पनि जारी
काठमाडौ, ४ बैशाख । संविधान निर्माणकोक्रममा देखिएका विवादमा सहमति खोज्न मुख्य तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको बैठक आज पनि जारी छ । राजधानीबाट झन्डै २० किलोमिटर दक्षिणी भेगको सेतीदेवी गाविस– १ स्थित हात्तीवनमा हिजोदेखि जारी आवासीय छलफल आज ठोस सहमति..
गैरआवासीय नेपालीलाई मताधिकारबारे निर्वाचन आयोगको समिति गठन
काठमाडौ, ४ बैशाख । गैरआवासीय नेपालीलाई मतादिने अधिकारबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगले समिति गठन गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि मताधिकार दिइनुपर्ने माग बढिरहेको बेला निर्वाचन आयोगले सम्भाव्यता अध्ययन समिति बनाएको हो । निर्वाचन आयोगका सचिव शंकर कोइरालाको..
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन शिर्ष नेताहरुको आवासीय बैठक हात्तिवनमा जारी ३ बैशाख २०६९, आईतवार १५:१४
काठमाडौ, ३ बैशाख । संविधानका विवादित बुँदा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन विषयमा छलफल गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक अहिले बसिरहेको छ । काठमाडौको हात्तिवनमा बसिरहेको बैठकमा एकीकृत माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस,नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु सहभागी छन् । बैठकमा..
राष्ट्रसंघका महासचिव द्धारा सेना समायोजनमा भएको सहमतिको स्वागत
काठमाडौ, ३ बैशाख । संयुक्त राष्ट्रसंघले सेना समायोजनका लागि दलहरुबीच भएको सहमतिको स्वागत गरेको छ । राष्ट्रसंघका महासचिव वानकी मुनले प्रेस विज्ञप्ती निकालेर झण्डै पाँच वर्षदेखिको गतिरोध तोड्दै दलहरुले माओवादी लडाकुहरुको समायोजनमा गरेको सहमति स्वागत योग्य भएको बताउनुभएको छ ।..
सरकारद्धारा लडाकु समायोजन सम्बन्धी कार्यविधी पारित, जेठ १४ सम्म बन्द हडताल नगर्न आग्रह
काठमाडौ, ३ बैशाख । सरकारले माओवादीका लडाकुको समायोजन सम्बन्धी कार्यविधी २०६९ पारित गरेको छ । आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो कार्यविधी पारित गरेको हो । कार्यविधीमा नेपाली सेना मातहत रहने गरी ४ वटा महानिर्देशनलाई बनाउने र बढीमा ६ हजार ५ सय लडाकुको समायोजन गर्ने उल्लेख छ..
सरकारमै भएको पार्टीको बन्द आब्हान, प्रधानमन्त्रीद्धारा मन्त्रीबाट हटाउने चेतावनी
काठमाडौ, ३ बैशाख । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव राजधानीमा खासै परेको छैन । यातायातका साधनहरू निर्वाध सन्चालन भइरहेका छन् भने बजारहरू पनि खुलेका छन् । शिक्षण संस्थाहरूमा भने सामान्य असर परेको छ । सङ्घीय राज्य सुनिश्चितताको माग गर्दै सरकारमै सहभागी..
आजबाट शीर्ष नेताहरुले संविधानको विवादीत विषयमा गोप्य छलफल गरेर सहमति जुटाउने
काठमाडौ, ३ बैशाख । संविधानका विवादित बुँदा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको बारेमा छलफल गर्न प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच आज गोप्य बैठक हुने भएको छ । बैठकमा एकीकृत माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरु सहभागी हुनेछन् । माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन..
समायोजनको विवादित विषयमा बन्यो सहमति २ बैशाख २०६९, शनिबार १८:३६
काठमाडौ, २ बैशाख । माओवादी लडाकुको समायोजन लामो समयदेखि दलहरुवीच विवादित रहँदै आएको थप चार विषयमा सहमति बनेको छ । सेना समायोजन विशेष समितिले गठन गरेको चार सदस्यीय कार्यदलले विवादित विषयमा सहमति गरेको हो । जसलाई आजै बसेका प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको बैठकले अनुमोदन समेत गरेको छ ।..
तरुण दल र महिला संघले पूर्णता पाए
काठमाडौ, २ बैशाख । नेपाली काग्रेसका दुई भातृसंगठन नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला संघले शनिवारबाट पूर्णता पाएका छन् । भ्रातृ संगठनको नेतृत्व भंगपछि संस्थापन र शेरबहादुर देउवा समूहबीचको विवाद चुलिएपछि माघ २१ गते उदयशम्शेर राणाको अध्यक्षतामा तरुण दल र डा. डिला संग्रौलाको सभापतित्वमा..
जेठ १४ मा संविधान ल्याउन त्यसअघिनै सहमतिको सरकारः अध्यक्ष खनाल
वैशाख २ – काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले निर्धारित समयमै नयाँ संबिधान ल्याउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण अनिबार्य भएको बताउनुभएको छ । सात बुदे सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न उहाँले जोड दिनुभयो । शान्ति र संविधानका..
‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरुद्ध सम्झौता गर्दिन’
काठमाडौ, २ वैशाख । नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले नयाँ बन्ने संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरुद्ध कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ महानगर समिति वडा नं ५ द्वारा नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति..
जातीय संघीयताको पक्षमा सत्तारुढ दल
कठमाडौ, २ बैशाख । सत्तारुढ प्रमुख दल एकीकृत नेकपा माओवादी र संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा जातीय पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा एक भएर उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तारुढ दलहरुको छलफलमा जातीय पहिचान विनाको संघीयता भएको संविधानलाई स्विकार नगर्ने..